EMBARQ Waxay Raadinaysaa Xal U Helista Gaadiidka Magaalada Istanbul (Fiidiyow) | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulEMBARQ Raadinta Qaraarka Istaraatiijiyada Isticmaalka Telefishinka
19 / 03 / 2014 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Metrobus, TURKEY, VIDEOS
Solutions EMBARQ Istanbul Traffic raadinaya: EMBARQ Turkey tasho Ali, Guddoomiyaha, Istanbul büyeü dhibaatada gaadiidka dheeraad ah waa weyn, EMBARQ Turkey Agaasimaha Arzu mullet ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda for horumarinta hab kale oo gaadiidka la heli karo iyo baaskiilka isticmaalka.
Shirkadda N Transformation ee gaadiidka 2014 ", oo ay wadaagaan Bangiga Adduunka iyo EMBARQ, ayaa dhawaan la qabtay. Shirka shir 2, oo ka dhacay xarunta dhexe ee Bangiga Adduunka ee Washington, wuxuu martigeliyey khabiiro xagga gaadiidka ah, maamulayaasha gudaha iyo wakiillada qaybaha gaarka ah ee adduunka oo idil.
Baro dhibaatooyinka gaadiidka magaalooyinka, xal bulshada iyo deegaanka ku ool ah iyo muhiimadda ay leedahay shirka baaro tusaalooyin guul ka soo adduunka oo ay soo saaraan, Turkey iyo sidoo. La tasho Ali, Guddoomiyaha Guddiga EMBARQ Turkey. Lataliyaha ayaa u sheegay Voice of America:
Tusaale ahaan dalalka soo koraya sida kuwa kale, qaabkani inta badan waa soo noqnoqoshada qaababka isticmaalka xagga galbeedka, halkii ay ka faa'iideysan lahayd waayo-aragnimada xagga galbeedka. Kordhinta tirada baabuurta ee qof walba iyo jidadka. Galbeedka, si kastaba ha ahaatee, daraasad culus ayaa loo qaaday si loo arko sida ay u saameyn karto dhaqaalaha xun ee khaladaadka lagu sameeyay jihada iyo sida xun ee tani saameyn ugu yeelanayso tayada nolosha. 10-20 ma aha wax 50-60 la sameeyey sanado badan, gaar ahaan suuqyada horumaray ee adduunka oo idil. Inkastoo ay jirto xaqiiqadan, oo ka faa'iideysanaysa waayo-aragnimadaa, waxa ay sii ballaarineysaa dhibaatooyinka nala hadla ee ina keena inaan ka qaadno oo aan ka dhigno Istanbul in ka badan iyo in ka badan, hal ama labo Istanbul. "
Hadda waxaa jira metrobus in Istanbul, waxaa jira basaska. Miyay kuwan yihiin qalabka xalka?
"Dabcan dhammaan gaadiidka dadweynaha waa habka xalinta. Laakiin xalalka gaadiidka dadweynaha waxay u baahan yihiin in ay isku xirmaan. Gaadiidka dadweynaha ma aha xalka keliya. Si loo yareeyo hawada wasakheynta inta ugu badan ee suurtogalka ah marka ay timaado gaadiidka waari kara, si loo daboolo baahiyaha gaadiidka ee dadka si caafimaad leh. Kuwaas oo ay ku jiraan socodka iyo baaskiilka. "
Metrobus waxaa loo adeegsadaa habka gaadiidka ugu yaraan kun qof oo kunka kun ee Istanbul maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Embarq, wax badan ayaa loo baahan yahay marka loo eego talaabadani oo isbeddelaysa duruufaha magaalada. Xiriirka gaadiidka ee joogtada ah waa urur aan dawli ahayn oo aan faa'iido doon ahayn oo ujeedkiisu yahay inuu helo xalal dhibaatooyinka gaadiidka ee magaalada. Istanbul waa shaki la'aan mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee loogu talagalay ururrada ka shaqeeya adduunka. rabitaan Tabby, oo agaasime ka ah hay'adaha Turkiga oo muujiyay fikradaha soo socda:
"Annagoo ah kooxda 9, waxaan nahay urur aan dowli ahayn oo aasaasay si loo helo xalal dhibaatooyinka gaadiidka magaalooyinka ee magaalooyinka kala duwan sida Istanbul, Eskisehir iyo Antalya. Waxaan ka heleynaa maalgalinteena Bloomberg Philanthropies iyada oo loo marayo Machadka Khayraadka Dunida ee Washington. Waxaan sidoo kale ka faa'iideysanaa taageerooyinka ku saleysan mashruuca. Waxaan leenahay koox si buuxda u shaqeyneysa garoonka. Waxaan falanqeyneynaa injineeradeena waxaanaan soo jeedinaynaa talooyinkeena xalinta dawladaha hoose sida tusaalooyinka adduunka. Waxaanu samaynay falanqeyn iyo baaritaan nabadgelyada jidadka ee 52 km khadadka metrobus. Tani waxay ka dhigan tahay in aanu falanqeynay si aan uga jawaabno su'aasha ah wixii loo qaban lahaa si loo hubiyo helitaanka khadka BRT ee muwaadiniinta naafada ah ee da 'kala duwan iyo muwaadiniinta caafimaadka qaba iyo sida shilalka gaadiidka looga hortagi karo. "
EMBARQ Turkey, iyo mid ka mid ah mashaariicda uu ku soo shaqeeyay maalmahan, baaskiilka iyada oo loo adeegsanayo qorshayaal gaadiidka si gelin nolosha İstanbullular'ın ah:
"Waxaan ka shaqeyneynay mashruuc waddo baaskiil ah oo lagu xiray gaadiid dadweyne oo ammaan ah oo ku yaal Istanbul sannadkii hore. Waxaan ku bilownay taageerada qunsulka Nederland waxaanan la shaqeyneynaa ISPART iyo IMM. Qeybta labaad ee sanadkan waxaan abuuri doonnaa hagid loogu talagalay jidadka baaskiil wadida ee magaalooyinka Turkiga. Dulsaarka baaskiilku wuxuu sii kordhayaa maalin kasta. NGO-yada iyo ururrada noo eg iyo annaga. Fikrado badan, rajo badan ayaa jirta. Jidka baaskiil arko kaliya Dedieu loo dalxiis tago dalka Turkiga ma aha meesha loogu talagalay isboortiga. Waxaan qabaneynaa shaqooyin loo qaadanayo qaabka gaadiidka.
Sida laga soo xigtay Arzu Tekir, kordhinta baaskiilada nolosha magaalada ma aha oo kaliya kor u qaadista ammaanka magaalooyinka by 60 boqolkiiba, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay dhaqaale aad u sarreeya. dadka dalka Turkiga ayaa kor u kacay boqolkiiba 2002 2012 ka xnumx'y ah. Heerka lahaanshaha lahaanshaha waa 12. Lambarradani waxay muujinayaan sababaha gaadiidka iyo xalinta dhibaatooyinka gaadiidka muhiim u ah.
Xalka tareenka ee taraafikada Istanbul
Xalka ka yimid Topbas illaa Istanbul
Nidaamka tareenada ee Istanbul
Waxa laga yaabaa in ay noqoto xal macquul ah oo loogu talagalay socodka gaadiidka ee Istanbul
Nidaamka Isgoysyada Taraafikada Isku-tagga Istaatistikada Gaadiidka
Xalka cusub ee taraafikada Istanbul! .. Iskuulka Korantada
Xalka dhibaatada ee magaalada Bursa waa magaalo
Xalka ugu dambeeyay ee Taraafiga Mudanya
Xal u noqoshada taraafikada Istanbul
Elazığ - Diyarbakır Qodobka - Alter - Eryol Isku-xidhka injineernimada ayaa ku guuleystay hindisada hindise iyo mashruuca wadada Gobolka Borseaya
Alper Engineering - Eryol Isku-xirka Iskaashatada Isku-dubaridka ayaa ku guuleystay hannaanka Bingöl - Solhan Separation - Baaritaanka wadada ee Yenibashak iyo mashruuca